weeraro lagu qaaday Shisheeyaha iyo Ciidamada maamulada u daacadda ah. – Shabakadda Amiirnuur
April 18, 2021 6:53 am by admin Views: 123
Weerarka koowaad waxa uu ka dhacay gudaha Magaalada Muqdisho gaar ahaan Degamda Dharkeynley waxaana lagu diLly Askeri jaajuus ahaa oo ka tirsan Dowladda Federaalka ah.
Dhanak Shbabeelaha hoose iyo jubada hoose Ciidamada Xarakada Shababaul Mujaahdiin ayaa qaaday weeraro kala duwan oo ka dhan ah Ciidamada Shisheeye iyo kuwa Maamulada Soomaalida ah ee daacadda ah,
Qarax Xalay ka dhacay Degmada wanla weyn ee Gobalka Shabeelaha hoose ayaa lagu dilay laba askeri oo ka tirsan Dowladda Federalaka ah halka shan kalena lagu dhaawacay kuwaasoo loola cararay gobaha Caafimaadka si loogu daweeyo.
Ciidamada Uganda iyo kuwa Dowladda Federaalka ah ee Fariisimamaha ku leh Magaalada Qoryooley ee isla shabeelaha hoose ayaa la kulmay weeraro is bar bar socday waxaana halkaa la isku weydaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
sidoo kale waxaa weeraro kuwaas la mid ah la kulmay Ciidamada Dowladda federaalka ah ee Dhufeysada ku leh Deegaanada Bariire iyo Sabiid oo ka wada tirsan Gobalka Shabeelaha hoose.
weeraradaan iyo qaraxa waxaa fulisiay oo Mas’uuliyadooda sheegatay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo hadba sii xoojineysa dagalakeeda ka dhan ah Shisheeyaha iyo Ciidamada la shaqeynaya ee Soomaaldia ah.
sidoo kale Ciidamada Xarakada Shababul Mujaahdiin waxay Xalay weerareen Ciidamada Maamulka Jubbaldn ee ku sugan deegaanada Yoontooy iyo Baar sanguuni ee Duleedka Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobalka jubada hoose.